ကိုယ်အလေးချိန်ကျသင့်တဲ့အာဟာရဓာတ် - Chocolate Slim
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Chocolate Slim
ကိုယ်အလေးချိန်ကျသည့်အစာအာဟာရ - တတ်နိုင်သောအာဟာရစနစ်၊ မီနူးများနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် Broad Bone သည်သင့်အားမည်သည့်အာဟာရစနစ်ကိုမဆိုပေးသည်။စံပြခန္ဓာကိုယ်ဖန်တီးခြင်းအတွက်အဆုံးမဲ့အစားအစာများနှင့်အစီအစဉ်များရှိသည်။ သို့သော်အမျိုးသမီးတိုင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အမျိုးသားများပင်ဤစမ်းသပ်မှုကိုမခံရပ်နိုင်ပါ။
အို၊ အစားအစာများစွာသည်အချိန်တိုအတွင်းရလဒ်ကောင်းများပေးနိုင်ပြီးstressရာမစိတ်ဖိစီးမှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်သက်ရှိတစ်ခုသည်စံပြခန္ဓာကိုယ်အတွက် "စစ်ပွဲအတွင်း" နှစ်ဆဆုံးရှုံးခဲ့ရသောကယ်လိုရီများအားလုံးကိုပြန်ပေးနိုင်သည်။
သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကမ်းလှမ်းနေပြီးခါးမှာပုန်းအောင်းနေတဲ့ခါးမှာဒါမှမဟုတ်နားရွက်ကမုန်းတီးခံရတဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့်သတိရပါ - အားလုံးကသင့်အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ Diet Guidelines
ပထမ ဦး စွာ၎င်းသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သစ်သီးများအမြောက်အများဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားဗီတာမင်များ၊ သတ္တုဓာတ်များနှင့်အမျှင်များဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဒုတိယ၊သံလွင်ဆီသို့မဟုတ်အခြားအိုမီဂါ -6 ကြွယ်ဝသောရေနံသင်၏အစားအစာတွင်သံလွင်ဆီကိုအဘယ်အရာအစားထိုးနိုင်သနည်း။
တတိယ၊ပင်လယ်စာနှင့်ငါး(တစ်ပတ်လျှင် ၂ ကြိမ်ကြိမ်) မကြာခဏအသုံးပြုခြင်း။
ပဉ္စမအသား၊ အထူးသဖြင့်ဝက်သား၊ အမဲသားနှင့်သိုးသငယ် (တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်) အသားစားသုံးမှုကိုကန့်သတ်ရန်အကြံပြုသည်။
သတ္တမ၊ နေ့လည်စာ / ညစာတွင်ဝိုင်နီကိုဖန်ခွက်တစ်ခွက်သောက်ရန်အကြံပြုသည်။wow, သင်ထရပါတယ်! ကောင်းပါတယ်၊ ဒီမှာအဓိကသော့ချက်စကားလုံးကဝိုင်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ကောင်းသော၊ အရက် (အထူးသဖြင့်ဖန်ခွက်တစ်ခုအတွင်း) အရသာရှိပြီးကျန်းမာပါသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီမြေထဲပင်လယ်အစားအစာဆိုရင်မင်းဒီမှာဘာပြောမလဲ။သူ့အကြောင်းကိုငါတို့သိပြီးသား” - မင်းဘယ်လောက်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။လိုပဲတောက်ပသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆွဲဆောင်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်အတွက်ဘာလဲစိတ်မပူပါနဲ့ Bone Wide ကမင်းကိုမလှည့်စားဘူး။ဤပါဝါစနစ်၏လှည့်ကွက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
တပတ်သုံးရက် (လူအများစုကတနင်္လာနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်သောကြာနေ့ကိုပုံမှန်ရွေးချယ်ကြသည်) သင်သည်ကောင်းသောအာဟာရ၏နိယာမနှင့်ကိုက်ညီသောအစာကိုစားသည်။
ကျန်သုံးရက်သည်အစာရှောင်သည့်နေ့များဖြစ်ပြီးတိရစ္ဆာန်အစာ (ဥ မှလွဲ၍) နှင့်ဝိုင်တို့ကိုအစားအစာမှဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
သင်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ မိမိကိုယ်ကိုဝမ်းဗိုက်ပွဲလုပ်နိုင်သည်။ အချို့သောခဲဖွယ်စားဖွယ်များသို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအစာကိုစားပါ။ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြည့်ညှင်းအတွက်စားသုံးကြသည်။
ဒီအစားအစာစနစ်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင် Aphrodite ၏အစားအစာဟုလည်းခေါ်ဆိုကြပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အလှအပ၏နတ်ဘုရားမကောင်းပြီ၊ ဤသည်ကားမှတ်ထားသောစကားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ကောင်းပြီ၊ အနီးကပ်ကြည့်ရအောင်။
တကယ်တော့ဒီလိုအစားအစာတွေကိုလှပသောဘုန်းတော်ကြီးများရဲ့ Athos အစားအစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါတွေအားလုံးဟာအာရုံကိုဆွဲဆောင်ဖို့နဲ့ "ဈေးနှုန်းကိုဖြည့်ဆည်းဖို့" အတွက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြတယ်၊ ဝိညာဉ်ရေးထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့လူတွေဟာဒီလိုလမ်းကိုစားတဲ့အတွက်အဲဒါကိုသင်လိုအပ်တယ်။ဒါ့အပြင်သံmonာတော်တွေဟာဂျပိန်တွေဖြစ်လေ့ရှိပြီးသင်၏အစားအသောက်အတွေ့အကြုံကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်သည်။
Broad Bone သည်ဤအာဟာရစနစ်ကိုကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအတွက်အဘယ်ကြောင့်ထိရောက်သည်ဟုယူမှတ်သနည်း။
ဒီအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အာဟာရကိုအခြေခံပြီးအစားအစာရဲ့မီနူးဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်တင်းပေးတယ်၊ ၎င်းတွင်ပရိုတိန်းများ,အဆီနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များပါဝင်သည်/ zxstrong> အရင်းအမြစ်များ၊ ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်အမျိုးမျိုးမှဖြစ်သည်။Pithecanthropus ကမစားသောကြောင့် ("keto diet") သို့မဟုတ်အစားအစာအလွှာမှသင့်ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခိုင်းသည်မဟုတ်ပါ (paleo diet) ။အစားအစာအားလုံးကိုသီးခြားစီစားရန်မလိုအပ်ပါ၊ ထိတ်လန့်စရာကောင်းပြီး၊ သင့်အစာအိမ်ရှိကြက်သားနှင့် buckwheat သည်ပconflictိပက္ခဖြစ်လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်း။ထမင်းစားချိန်နှင့်ပမာဏကိုအထူးကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
ဒါကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သောအစားအစာဖြစ်သည်။သင်သည်ပုံမှန်အားလပ်ရက်များနှင့်ပုံမှန်အားလပ်ရက်များနှင့်လွယ်ကူစွာရောနှောနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်၏စွမ်းဆောင်ချက်တွင်အစားအစာသည်ဤပုံစံနှင့်တူသည်။ နေ့စဉ်သင့်မီနူးမှဟင်းလျာ ၁-၂ သည်ပိန်သည် (ဆိုလိုသည်မှာတိရိစ္ဆာန်အဆီမပါဘဲ) ။အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းအစာစားရန် ပို၍ အဆင်ပြေလိမ့်မည် - ၂ ရက်ပိန်သောနေ့ - အသား / ငါးရက် ၃ - ဝမ်းပွဲ ၁ ပွဲ။သို့မဟုတ်သက်သတ်လွတ် ၁ ရက် (ပရိုတင်း - အခွံမာ၊ ပဲ၊ ပဲ) - သက်သတ်လွတ် ၁ မျိုး (ပရိုတင်း - နို့ထွက်ပစ္စည်း) - ဝမ်းဗိုက် ၁ ပွဲ - ပုံမှန် ၃ ရက်။အဓိကအရာသည်သင်၏အဆင်ပြေမှုဖြစ်သည်။ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာစနစ်၏စည်းမျဉ်းများသည်ကျောက်ပြားပေါ်တွင်ဘုရားသခင်ထွင်းထုထားသောစားပွဲများမဟုတ်ပါ။မတူကွဲပြားသောမော်ဒယ်များကိုသင်စမ်းကြည့်ပြီးသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ / P>
ဤအစာရှောင်သောနေ့များသည်အဘယ်ကြောင့်လုံးလုံးမရှိသနည်း။အဖြေမှာရိုးရိုးလေးဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအရာအတွက်၊ အသစ်နှင့်ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုကိုသင့်အားဖွင့်ပေးလိမ့်မည်။ခေတ်သစ်သုတေသနပြုချက်အရမတူကွဲပြား။ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစားအစာများစားသူများသည်အသက်ရှည်ပြီးဖျားနာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။အစားအစာရွေးချယ်မှုသည်နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာနှင့်ဆီးချိုရောဂါစသည့်ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အန္တရာယ်များကိုသက်ရောက်စေသည်။အထူးသဖြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများတွင်အစားအစာများတွင် phytochemicals ဟုလူသိများသည့်သဘာဝပစ္စည်းများစွာပါဝင်သည်။လက်ရှိသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤအရာ ၀ တ္ထုများ၏ ၁၂၀၀၀ ကျော်ကိုသိရှိကြသည်။ အများစုမှာကင်ဆာနှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။အမျိုးမျိုးသောအစားအစာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစားအစာများတွင်ပေါင်းစပ်ထားသောအမျိုးမျိုးသောအဟာရများ၌တွေ့ရသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများလုံလောက်စွာရရှိနိုင်မည့်အလားအလာရှိသောအစားအစာများသည်အမျိုးမျိုးသောအစားအစာများ။
မတူကွဲပြားခြင်းသည်အုပ်စုတစ်ခုစီအတွင်းထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုဆိုလိုသည်။ ဥပမာ - သီးနှံများတွင်ဂျုံ၊ ကောက်၊ ဆန်၊နောက်ဆုံးတွင်အစားအစာနှင့်မတူညီသောထုတ်ကုန်မျိုးသည်မတူညီသောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသည်။တစ်နည်းပြောရရင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကသင့်ကိုနောက်တစ်ခုမလုပ်နိုင်တာကိုပေးနိူင်တယ်။နေ့တိုင်းမတူညီသောအစားအစာ ၃၀ စားရန်အကြံပြုသည်။ယခုသင်တစ်နေ့လျှင်မည်မျှစားသောအစားအစာကိုတွက်ချက်ပါသနည်း။ကြက်သား, buckwheat, အိမ်တွင်းဒိန်ခဲနှင့်ပန်းသီး - fitnyashka Mashka ၏သေတမ်းစာအရ? ဟုတ်ပါတယ်၊ ၃၀ ကအများကြီးပါပဲ၊ ငါတို့လည်း oligarchs မဟုတ်ဘူး။သို့သော်မည်သည့်အထူးကုန်ကျစရိတ်မှမရှိဘဲဤပမာဏကို ၁၅-၂၀ သို့ယူဆောင်လာနိုင်ပါသည်။အစာ၊ အသား၊ ငါး၊ သို့မဟုတ်ကြက်မစားနိုင်လျှင်အစာစားချိန်သည်ဒီနေ့တွင်သင်ဘာတတ်နိုင်သည်ကိုသိလိုပါလိမ့်မည်။အစာရှောင်ခြင်းနေ့သည်သက်သတ်လွတ်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်၏ပရိုတင်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်သင်၏ကြက်ဥနှင့်နို့များကိုသင်၏အစားအစာတွင်ထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။သင်သည်သင်၏အစားအစာ၏တိကျသောအရိပ်အမြွက်မရှိဘဲတစ်နေ့တာကိုကုန်လွန်စေလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကြိုဆိုပါ၏။ပရိုတိန်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာနှင့်ဆာလောင်မှုကိုကြာရှည်စွာဖယ်ရှားပေးကြောင်းသတိရပါ။
သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုဤနည်းဖြင့်လည်းကူညီနိုင်သည်။ဟုတ်တယ်၊ယနေ့ကမ္ဘာမြေသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တစ်နှစ်လျှင်အသား ၄၂ ကီလိုဂရမ်ခန့်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်အပေါ်ကြီးမားသော ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေပြီးဖြစ်သည်။ယူကေတွင်လူတစ် ဦး သည်ပျမ်းမျှတစ်နှစ်လျှင်အသား ၈၀ ကီလိုဂရမ်ထက်နည်းသောအသားများ၊ ယူအက်စ်တွင် ၁၂၅ ကီလိုဂရမ်စားသည်။ယနေ့ဂရိများသည်ဗြိတိသျှကဲ့သို့အသားများများစားစားကိုသာစားကြသည်၊ သို့သော်တိုင်းပြည်ခုနစ်နိုင်ငံလေ့လာမှုစတင်သည့် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင်တစ်နှစ်လျှင်ပျမ်းမျှအမဲသား ၂၂ ကီလိုဂရမ်သာတစ်နှစ်လျှင်စားသုံးခဲ့သည်။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်သီးနှံထုတ်လုပ်ခြင်းထက်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များပိုမိုထုတ်လုပ်သည်၊ ရေပိုမို အသုံးပြု၍ မြေလိုအပ်သည်။အလားတူအာဟာရဓာတ်စနစ်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်သင်၏အသားနှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများထုတ်ယူသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှင့်ဂေဟဗေဒအရဤသည်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်သင်သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျပြီးကျန်းမာရေးတိုးတက်လာရုံသာမကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ပါ။
တစ်ပါတ်အတွက်နမူနာ menu ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏အစွန်အဖျား - သစ်သီးခြောက်များ၊ သီးနှံများ၊ ပဲပင်များ၊ tofu ဒိန်ခဲ၊ ပဲပုပ်အသား၊ အခွံမာသီး၊ ဒိန်ခဲ၊ ကြက်ဥ၊သင်တို့သည်လည်းခေါက်ဆွဲ, တပြင်လုံးကိုစပါးကိုပေါင်မုန့်, ​​အာလူးလုပ်နိုင်ပါတယ်။နံ့သာမျိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ငရုတ်ကောင်းများကိုမမေ့ပါနှင့် - ဟင်းလျာများတွင်ထူးခြားသောအရသာကိုထည့်ပြီးအစာခြေခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
သင်ဟာကယ်လိုရီရေတွက်လျှင် (သို့မဟုတ်၊ အကောင်းဆုံး၊ ဖယ်ထုတ်ခြင်း) အလွန်နိမ့်ဆုံးနိမ့်ဆုံးသို့လျှော့ချသည်။:
အသား - အမဲသား၊ ဝက်သား၊ သိုးသငယ်၊ ဝက်အူချောင်း (ဘာဂါ၊ ဝက်အူချောင်း၊ ဘေကွန်၊ ဝက်ပေါင်စသည်);
ပုစွန်၊ ပြည်ကြီးငါး၊ ငါးချောင်းအပါအ ၀ င်ငါးနှင့်ပင်လယ်စာ;
ချိုသော pastries များ - ဘီစကစ်၊ ကိတ်မုန့်၊
သကြားနှင့်သကြားဓာတ်ပါဝင်သောအချိုရည်များ (ကိုကာကိုလာ၊ လင်မနိတ်၊ စွမ်းအင်အချိုရည်);
အရက် (ဝိုင်၊ ဘီယာ၊ cider, ၀ ိုင်၊ ကော့တေး);
mayonnaise နှင့် fatty salad dressings ။
သီးနှံ: ဆန်, bulgur, couscous, မုယောစပါး, oats နှင့် quinoa;
ပဲပင်များ - ပဲ၊ ပဲ၊ ပဲစေ့စသည်တို့။
ဂရိ (သဘာဝ) ဒိန်ချဉ်၊ နို့၊ ကဖေး၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊
အရက် (တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်သို့မဟုတ် ၁၇၅ မီလီမီတာဖန်ခွက်တစ်ခွက်);
သကြားနှင့်သကြားဓာတ်မြင့်မားသောအချိုရည်များစားသုံးမှုကိုလျှော့ချပါ၊ သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသေးလျှင်၊ သူတို့ကိုရှောင်ရှားပါ။မဟုတ်ပါ၊ သကြားသည်မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၊ ဥပမာ၊ သကြားမှိုသကြားရရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ ချောကလက်ဘားမှပြ, နာများစတင်ပါက၊သင်သည်သင်၏ချိုမြိန် / ကတ္တရာစေး / ဆားငန်သောအလိုဆန္ဒများကိုဖယ်ရှားလိုပါကဤဆောင်းပါးတွဲသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ (တစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ ထိအရှိန်ဖြင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်သင့်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီလိမ့်မည်) ။
သင်သည်သင်၏အစားအစာကိုပြောင်းလဲနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမြောက်အများကိုစားသုံးခြင်း၊ ပဲများ၊ ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်အခွံမာသီးများစားသုံးခြင်းသည်သင့်ကိုအမှန်အကျိုးပြုပါလိမ့်မည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။monounsaturated နှင့် polyunsaturated fats များ၊ အစားအသောက်ဖိုင်ဘာ၊ ဗီတာမင်များ၊ သဲလွန်စဒြပ်စင်များ၊
အဆင်ပြေသောအစားအစာများ၊ မုန်လာဥနီများနှင့်အချိုရည်အမျိုးမျိုးကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့တွင်ပါ ၀ င်သောအဆီ၊ ဆားနှင့်သကြားတို့ကိုလျော့နည်းစေသည်။သို့သော်သင်သည်လတ်ဆတ်သောထုတ်ကုန်များမှကျန်းမာသောအစားအစာများကိုသီးခြားလွတ်လပ်စွာပြင်ဆင်နိုင်သည်။ဤအရာသည်သင့်အစားအစာမှ“ အချည်းနှီးသော” ကယ်လိုရီများကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်နိုင်သမျှအာဟာရဖြစ်စေနိုင်သည်။
သို့သော်ထိုနာကျင်ကိုက်ခဲသောကယ်လိုရီများကိုမမေ့ပါနှင့်။Uuuh သငျသညျ bastards! ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အဆီနှင့်ချိုသောစားသုံးမှုများတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းကိုယ်အလေးချိန်တက်ကြသည်။ဒါကအပိုကယ်လိုရီကြောင့်ဖြစ်သည်။ဒါကြောင့်ကယ်လိုရီများတွက်ချက်ရန်ကြိုးစားပါ (သို့) အနည်းဆုံးတွက်ကြည့်ပါ။
တကယ်တော့လျှို့ဝှက် (သို့) မှော်အတတ်နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။ အရာရာကိုတဖြည်းဖြည်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုမရှိဘဲလုပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်းကျပ်သောကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းသို့ချက်ချင်းမောင်းနှင်ပြီးပထမဆုံး နေ့မှစ၍ အပြည့်အဝနှင့်အပြည့်အဝစားရန်ကြိုးစားရန်မလိုအပ်ပါ။အကယ်၍သာ ထိုကဲ့သို့သောမှန်ကန်သောစံပြအာဟာရမရှိပါက၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားပြီးအံ့သြစရာကောင်းသည်။
သန့်ရှင်းသောအစာကိုစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအဖြေမှာသင်၏အစားအစာကိုဆေးကြောပါ။
သင့်အစားအစာ၏အခြေခံဖြစ်လိုသောအစားအစာများကိုစာရင်းပြုစုပါ။KBZHU၏မူဘောင်အတွင်း၌ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ။ အစွန်းရောက်မှုများကိုမမြန်ပါနှင့်။ သင့်အစားအစာတွင်ပရိုတင်းများ၊ အဆီများနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များပါ ၀ င်သင့်သည်။
သင့်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအစားအစာစာရင်းကိုရေးပါ။မည်သည့်အရာမဆို - ရေခဲမုန့်၊ ပေါင်မုန့်၊သင့်အတွက်သူတို့လက်ခံနိုင်သည့်နှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် KBZhU တွင်ရေးပါသို့မဟုတ်သင်သို့မဟုတ်တားမြစ်ထားသည့်အစာကိုစားနိုင်သည့်အချိန်ကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ထားပါ။
သင်တစ်နေ့လျှင်မည်မျှစားရန်လိုအပ်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပါ။တစ်စုံတစ် ဦး က ၃ ကြိမ်အဆင်ပြေသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် feline မူအရစားသည်၊ အနည်းငယ်ဖြစ်သော်လည်းမကြာခဏစားသည်။၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောအစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလျစ်လျူရှုမထားသင့်ပါ။စကားမစပ်, အပိုင်းအစအစားအစာကိုယ်အလေးချိန်ဖို့အထောက်အကူမဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
သင်သိသည်၊ တစ်ပတ်ခန့်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောမီနူးများကကျွန်ုပ်တို့ကိုအမြဲတမ်းပြုံးစေသည်။ ၎င်းတို့ကိုသေချာစွာတိကျစွာလိုက်နာသောအနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်ရှိပါသလား။ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အရာရာတိုင်းဟာငါတို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ လိုအပ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေမရှိတော့ရင်နောက်ထောပတ်သီးနဲ့ chia မျိုးစေ့တွေအတွက်ပိုက်ဆံမရှိတော့ဘူး၊ ချက်ပြုတ်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူး၊
ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအင်တာနက်မီနူး၏တင်းကျပ်သောမူဘောင်သို့မောင်းထုတ်ရန်သင်္ဘောသဖန်းသီးဖြင့်ရေးသားထားသောနားလည်မှုသည်ပိုမပိုစတိုင် (သို့) အပြန်အလှန်ပုံစံဖြင့်ကယ်လိုရီရေတွက်ခြင်းသည်စိတ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၁၀၀% မှန်ကန်သောအာဟာရဖြစ်သော်လည်းသင်ရလဒ်များမရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် Bone Broad သည်သင့်နေ့စဉ်အစားအစာတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အရသာနှင့်မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများကိုရွေးချယ်ပေးသည်။parmesans, truffles သို့မဟုတ် Firebird နှင်တံမရှိပါ။အရာအားလုံးရရှိနိုင်ရိုးရှင်းအရသာနှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကွဲပြားခြားနားသည်!
အာလူး - ၃ ယူနစ်။
ပင်လယ်အော်အရွက် - ၂ စင်း။
ကြက်သွန်နီ - ၁ စင်း။
သန့်စင်ပြီးနေကြာဆီ - 25 ml
မုန်လာဥ - ၁ pc ။
မြေပဲငရုတ်ကောင်းအနက် - ၃ ပေါင်
ခရမ်းချဉ်သီးများ - ၂ ပြား
ဆား - ၁ Tsp
ကြက်သွန်ဖြူ -5 လေးညှင်းပွင့်
အဝါရောင်ပဲဟင်း - 200 ဂရမ်။
အလွန်မွှေးကြိုင်သောအရသာနှင့်စပ်သောပဲဟင်းချိုရည်။ချက်ပြုတ်နည်းအရပဲ၊ ငန်အိုး၊ ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်သံပုရာတို့ကိုရေခုနစ်ခုတွင်ဆေးကြောပြီးလျှင်ဟင်းချိုထဲသို့ထည့်သည်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်အနည်းငယ်ထည့်ပြီးခရမ်းချဉ်သီးများကို ၅ မိနစ်ခန့်ကြော်သည်။ထို့နောက်ပဲလေးများထည့်ပြီးရေအနည်းငယ်ထပ်ဖြည့်ပြီးအပူနိမ့်ကျသည်အထိချက်ပြုတ်သည်အထိအရာရာကိုစွပ်ပြုတ်ထည့်သည်။ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်ရာသီထည့်ပါ။
ဒိန်ခဲကိုသီးခြားခွဲပြီးလျှင်ကြက်သွန်ဖြူကိုခုတ်ပါ။အချဉ်ဟင်းချိုကိုဆန်ခါဖြင့်ပွတ်ပြီးအမြှုပ်မထွက်စေရန်ရောနှောထားသောရောနှောခြင်းဖြင့်မထိုးရန်အကြံပြုသည်။တူရကီပဲဟင်းဟင်းချိုနှင့် croutons များနှင့်သံပုရာတစ်အချပ်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
၁. ၅ ကီလိုဂရမ်အာလူး၊
၃ tbsp ။ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိဇွန်း။
ဆား၊ ငရုတ်ကောင်း၊ သစ်ကြံပိုး၊ ဇီနီ။
အာလူးများကိုသုတ်လိမ်းပါ၊ ဆေးကြောပါ၊ ကြီးမားသော Cube များထဲသို့ခုတ်ပါ။ထုကုန်တယ်ကြက်သွန်နီ, ကြက်သွန်ဖြူ, ခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်း, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, ပင်လယ်အော်အရွက်, ဆားထည့်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီဖြည့်ကာဒယ်အိုးကိုထိပ်ဆုံးသို့ဖြည့်ကာမိနစ် ၃၀ ပိတ်ထားသည့်အဖုံးဖြင့်မျှတည်ထားပါ။ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိကိုရေအနည်းငယ်ဖြင့်ရောထည့်ပါ။ အမွှေးအကြိုင်များကိုထည့်ပါ။ ချက်ပြုတ်သည့်အာလူးထဲသို့ထည့်ကာအပူကိုလျှော့ချပါ။အပူမှဖယ်ရှားပြီးနောက်မြေပြင်ငရုတ်ကောင်းနှင့်ဖြန်းကာ5မိနစ်အဖုံးနှင့်အတူဖုံးလွှမ်းထားသည်။ဒီပန်းကန်ကအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (၂ ခုအတွက်):
၈၀ ဂရမ်နူးညံ့သော tofu / ထောပတ်ဒိန်ခဲ
၁၀၀ ဂရမ်နို့ / ပရိုတိန်း
ဇွန်း ၁ ကိုဇွန်းအမှုန့် (၂၀ ဂရမ်ချို့တဲ့သောပရိုတိန်းဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်)
ငှက်ပျော၊ရောစပ်ထားသောအေးခဲနေသောငှက်ပျောတုံး၊ tofu၊ ပဲနို့နှင့်ကိုကိုး (ပရိုတိန်း) ကိုပေါင်းစပ်ပါချောမွေ့သည်အထိ Whisk နှင့်ချက်ချင်းအစေခံ။
အမှုန့်တစ်မျိုး (၁၂၅ ဂရမ်) တွင်ပါဝင်သည်။၉၇ ကီလို၊ ပရိုတင်း ၄ ဂရမ်၊ အဆီ ၂ ဂရမ်၊ ၁၆ ဂဂဘိုဟိုက်ဒရိတ်
ကိတ်:၃ ဥ၊ ၁၅ ဂရမ်။ကိုကိုးမှုန့်sahzam
ဖြည့်သည်: 300 gr ။အနိမ့်အဆီအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ, 4-5 tbsp ။အချဉ်ဖောက်ထားသောနို့သို့မဟုတ်ဒိန်ချဉ် (အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၏အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး - အကယ်၍ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်လျှင်ဤပါဝင်မှုကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်), sahzam, ၅၀ ဂရမ်သီး (ရွေးချယ်နိုင်သည်)
ကိတ်မုန့်ကိုပြုလုပ်ရန်လူဖြူများကိုအဝါရောင်နှင့်ခွဲထားရန်လိုအပ်သည်။အနှစ်များကိုကိုကိုးနှင့် sahzam ဖြင့်ကြိတ်ဆုံကြိတ်ကာအမြင့်ဆုံးအထိလူဖြူများကိုရိုက်နှက်ပါ။ထို့နောက်လူဖြူများကိုအများအားဖြင့်အနှစ်များအဖြစ်ကိုကိုးများနှင့်ရောနှောပါ။ပြင်ဆင်ထားသည့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုသားရေစာဖြင့်ထုပ်ထားသောမုန့်ဖုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်ဖြန့်ပါ။သင်သည်စတုဂံအရွယ်အစား ~ 20x30 cm ရှိသည်။ 180C တွင်မိနစ် ၂၀ ခန့်ဖုတ်ပါ။မီးဖိုထဲမှဖယ်ထုတ်ပြီးမုန့်ဖုတ်သည့်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုဖွင့်ပြီးကိတ်မုန့်ဖုတ်ထားသောစက္ကူကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပါ။
ဖြည့်စွက်ရန်အတွက်သင်၌စပါး၊ ဆာဇမ်နှင့်အချဉ်ဖောက်ထားသောနို့များရှိပါကအိမ်တွင်းဒိန်ခဲကိုချောမွေ့စွာရောမွှေပါ။ထိုအစာကိုကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်ဖြန့်ပါ၊ သီးကိုထည့်ပြီးလိပ်တစ်ခုထဲသို့လှိမ့်ပါ။ဒီလိပ်ဟာရေခဲသေတ္တာထဲမှာနာရီဝက်လောက်ရပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုအစာကျွေးနိုင်ပါတယ်။
100 ဂရမ်။ :120,3kcal, 17 gr ။ရှဥ,4ဂရမ်။အဆီ, 3.6ဂရမ်။ဘိုဟိုက်ဒရိတ်
ဘူးခွံ (၅၀၀ ဂရမ်) ဖြူပဲ
၈၀ ဂရမ်oat မုန့်ညက် (သို့မဟုတ်ပဲမြေသား oatmeal)
မြေတပြင်လုံးဘောဇဉ် (50 ဂရမ်)
be ပဲတစ်မျိုးလုံး၊ ကြက်သွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နေပူခြောက်ခရမ်းချဉ်သီးများ (ဆီဖယ်ရှားပစ်ရန်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပါ), ပင်စိမ်း၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့်ငရုတ်ကောင်း၊ အစာစားသည့်ပရိုဆက်ဆာသို့မဟုတ် Blender ကို အသုံးပြု၍ ချောမွေ့သည်အထိရောနှောပါ။ကျန်ရှိနေသေးသောပဲနှင့် oatmeal ထည့်ပြီးနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောမွှေပါ။သငျသညျတော်တော်လေးထူအလေးချိန်ရသင့်တယ်။ထို့နောက်ကြီးမားသော non-stick skillet ကိုကောင်းစွာအပူပေးပြီးတစ်ဖက်တွင် 5-7 မိနစ်နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင် 4-6 မိနစ်ခန့်မြှုပ်ပါ။လတ်ဆတ်သောခရမ်းချဉ်သီးအချပ်နှင့်ဆလတ်နှင့်အတူသီးနှံ Bun အပေါ်ပူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
ဘာဂါတစ်ခုမှာ၄၈၈ kcal၊ ၃၀. ၅ ဂရမ်။ပရိုတိန်း, 6.3ဂရမ်။အဆီ, 93 ဂရမ်။ဘိုဟိုက်ဒရိတ်
လိပ် ၁၂ ခုအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ -
ကြီးမားသော nori အရွက် (ပင်လယ်ရေမှော်ခြောက်)
1/4 အလယ်အလတ် zucchini
အပင်ပေါက်များ (ဂျုံ၊ ပဲ၊ မုန်လာဥ) ၏လက်တဆုပ်စာ
၁ tbspDijon မုန်ညင်းက
4 tbspအာဟာရတဆေးသို့မဟုတ်သဘာဝဒိန်ချဉ် ၁. ၅%
၂ TspTamari ငံပြာရည်သို့မဟုတ်ပဲပိစပ်
မူရင်းစာရွက်တွင်ငံပြာရည်၏အောက်ခြေသည်အာဟာရတဆေး (ဇွန်း ၄ လုံး) (အာဟာရတဆေးပါသောသို့မဟုတ်အာဟာရတဆေး) (မုန့်ဖုတ်သောကုန်ပစ္စည်းများတွင်အသုံးပြုသောတဆေးကိုမရောထွေးရန်) ဖြစ်သည်။၎င်းသည်ပရိုတိန်းနှင့်ဗီတာမင်များ (အထူးသဖြင့်အုပ်စု B) တွင်ပါ ၀ င်သောအားဖြင့် (အပူကုသမှုဖြင့်သေဆုံးသည်) သို့သော်တဆေးမပျက်စီးပါ။၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်ဘက်တီးရီးယားဗီတာမင် B12 ပါဝင်သည်။
ဟင်းလျာများကို "ဒိန်ခဲ" အရသာသို့မဟုတ်ထူထပ်သောသဟဇာတဖြစ်စေရန်အတွက်ပီဇာနှင့်အိုမီလက်၊ ဟင်းချိုများ၊ ငံပြာရည်များ၊သင့်မီးဖိုချောင်တွင်ဤကဲ့သို့သောအစားအစာများမရှိပါကဤမှော်ဆေးကိုသဘာဝဒိန်ချဉ်ဇွန်း ၄ ခုဖြင့်အစားထိုးပါ။
စူပါဆော့စ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုပေါင်းစပ်လိုက်ရုံဖြင့် cilantro ရွက်များကိုထည့်ကာချောမွေ့သည်အထိရောနှောပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ထောပတ်သီးအားလုံးကိုဆေးကြောပြီးအခွံချပါ။ထို့နောက် zucchini နှင့်မုန်လာဥနီများကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ ပါးလွှာသောရှည်လျားသောတုတ်များဖြင့်ခုတ်ဖြတ်ပြီးလျှင်ထောပတ်သီးကိုပန်းကန်လုံးထဲထည့်ပြီးတစ်သားတည်းရှိသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်အသွင်ပြောင်းရန်ခက်ရင်းကိုသုံးပါ။nori leaf တွင်ထောပတ်သီးကိုရက်ရောစွာဖြန့်ကာဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုပင်ပေါက်များနှင့်အတူထားပါ။
ထို့နောက်ခေါက်ပြီးလျှင်အရွက်တစ်ခုစီကို ၆ ပိုင်း ခွဲ၍ ဝတ်ပြုပါ။ သို့မဟုတ်လျှင်လျှို့ဝှက်ငံပြာရည်သည်သင့်ကိုစောင့်နေလိမ့်မည်။
၆ လိပ်တွင် -၉၅ kcal၊ 2.5grရှဉ့်,6ဂရမ်။အဆီ,6ဂရမ်။ဘိုဟိုက်ဒရိတ်။
B က 150 ဂရမ်။ဆော့စ်:91 kcal, 7.2ပရိုတိန်း, 2.3gr ။အဆီ, 10 ဂရမ်။ဘိုဟိုက်ဒရိတ်။
အခွံခွာပြီးငှက်ပျောသီးကို ၃-၄ ပိုင်းခွဲပြီးပြီးလျှင်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအနည်းဆုံး ၂ နာရီထားပါ။ထင်းသီးသောအသီးများကိုဖယ်ရှားပြီးချောမွေ့သည်အထိ Blender ဖြင့်ရိုက်ပါ။
အခြေခံအားဖြင့်သင်သည်ငှက်ပျောအခြေစိုက်စခန်းသို့မည်သည့်ဖြည့်စွက်မှုမဆိုထည့်နိုင်သည်။ဥပမာအားဖြင့် - ကိုက်ညီမှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်မြေပဲထောပတ်၏ဇွန်း ၁-၂ နှင့်နို့ / ပရိုတင်းအချို့ကိုအေးခဲနေသောငှက်ပျောတစ်ခုထဲသို့ထည့်ပါ။သငျသညျသွေ့ခြောက်သောအသီးကိုသီးချိုမြိန်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်, သို့သော်ငှက်ပျောသီးမှည့်လျှင်၎င်းသည်အလွန်ချိုမြိန်သည်။
H ကို 60 gr ။ပါဝင်သည်: 113 kcal, 2.4gr ။ပရိုတိန်း, 6.3ဂရမ်။အဆီ, 11.6ဘိုဟိုက်ဒရိတ်။
အလယ်အလတ်ပန်းသီး ၅ လုံး၊
1-2 st ။ဌ။ဂျုံ၊
ပန်းသီးများကိုအခွံချွတ်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲဒါဟာအများကြီးပိုအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့က pancakes မှာနူးညံ့ကြင်နာမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ (အားလုံးပြီးပါပြီ၊ ပန်းသီးတစ်လုံးလုံးစားသုံးခြင်းဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင်ဂရုစိုက်နိုင်ပါတယ်! ) ဒါကြောင့် Peeled version ကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။ချဉ်သောအချဉ်ကိုဖျန်းပါ။ ဖျော်ရည်အနည်းငယ်ကိုညှစ်ပါ။ ထို့နောက်သကြားဓာတ်ထည့်ပါ။ (ပန်းသီးသည်အချဉ်ပေါက်လျှင်သို့မဟုတ်ချိုပါကသကြားပမာဏကိုချိန်ညှိပါက) ဆား၊ ဆိုဒါနှင့်သစ်ကြံပိုးခေါက်ပါ။ဆန္ဒရှိလျှင်, pancakes ၏အရသာအခွံမာသီး, လိမ္မော်ခွံသို့မဟုတ်အုန်းသီးထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
အစာအိမ်၊ အစာ၊ အသီး၊ ဖရဲသီး၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများနှင့်ကြက်ဥ၊ မုန့်ညက်နှင့်သကြားလုံးများ၊ အချိုရည်များ၊ တားမြစ်ထားသောအစားအစာများ၊) နှင့်အနိမ့်အချဉ်ဓာတ်နှင့်အတူအစားအစာအရေအတွက်2။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက်ပရိုတင်းဓာတ်ပါသောအစားအစာ - ခွင့်ပြုထားသောအစားအစာများ၊ တစ်ပတ်အတွက်မီနူးများ၊ အသုံးဝင်သောအကြံပြုချက်များ။
အမိန့် Chocolate Slim 50% လြှော့ခွငျး